Global Voices teny Malagasy » Ho An’ireo Fianakaviana Shinoa Mbola Miandry Ny Valin’ny MH370, “Zavatra Efa Hita” Mahavaky Fo Ny Fianjeran’ny Fiaramanidin’ny Malaysia Airlines Tao Okraina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jolay 2014 8:39 GMT 1	 · Mpanoratra Owen Guo Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Malezia, Okraina, Rosia, Shina, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Voina
Okrainiana manatitra voninkazo, labozia ary kilalao eo am-bavahadin'ny masoivohon'i Pays-Bas ao Kiev, ny 17 Jona 2014. Zotram-piaramanaidina MH17 Amsterdam – Kuala Lumpur an'ny Malaysian Airlines MH17 nisy nanjera ny maraimben'io andro io. Sary an'i Oleksandr Ratushniak. Fizakàmanana Demotix
Nanohina fianakaviana Shinoa maro nanan-kavana tao anatin'ilay sidina MH370 an'ny Malaysia Airlines, nanjavona tamin'ny Martsa, raha niala tao Malezia ho any Shina, ny fianjeran'ilay fiaramanidin'ny Malaysia Airlines tao Okraina.
Bala afomanga no namely nampianjera ny sidina MH17 tany akaikin'i Torz ny Alakamisy teo, faritra iray fehezin'ireo mpitaky fisintahana sy mpiara-dia amin'i Rosia, araka ny  nambaran'ny masoivohom-baovao Reuters. Samy miampanga ny mpifanandrina aminy ho tompon'andraikitra tamin'iny fianjerana iny ny governemanta Okrainiana sy ny mpihoko. Nisidina avy ao Amsterdam ho any Kuala Lumpur renivohitra Maleziana ilay Boeing 777.
Ho setrin'ilay loza, tamin'ny Zoma dia nilaza ny mpitondra tenin'ny Ministera Shinoa misahana ny Raharaham-Bahiny hoe : “Mahatsiaro tohina izahay taorian'ny nandrenesana ny fianjeràn'ny sidina MH17 an'ny Malaysian Airlines tao atsinanan'i Okraina. Manolotra ny fiaraha-miory sy ny fiombonana alahelo amin'ireo fianakavian'ny niharam-doza izahay. Antenainay fa tsy ho ela dia ho fantatra ny antony niteraka izany.”
Taty aoriana dia nanamafy ilay minisitra fa nisy terataniny monina ao Hong Kong maty tamin'iny loza iny.
Mbola tsy afaka ao an-tsaina ny fahatsiarovana ho an'ireo izay tsy mahafantatra ny zavatra nitranga nanjo ireo havan-tiany tao anatin'ny sidina MH370 taorian'ny nanjavonany tsy ho hitan'ny “radar” intsony ora vitsy monja taorian'ny nialàny tao Kuala Lumpur ny 8 Marsta teo. Tsy mbola hita aloha hatreto ilay fiaramanidina izay nitondra mpandeha 239 tao anatiny. Fanjavonana izay niteraka fiaraha-mientana iraisam-pirenena sy ezaka vonjy voina goavana indrindra teo amin'ny tantaran'ny sidina eny an'habakabaka.
Tsy nisy na iray aza ninoana ho velona tamin'ireo fianjerana fiaramanidina roa ireo. Nisy Shinoa 154 tao anatin'ny MH370. Ary saiky teratany avy any Pays-Bas daholo ny ankamaroan'ny tao anatin'ny MH17.
Tamin'ny fanehoankevitra momba ilay loza mahatsiravina faharoa nanjo ny fiaramanidin'ny Malaysian Airlines tato anatin'ny volana vitsy monja, ny Kaomitin'ny Fianakavian'ny tao anatin'ny MH370, kaomity natsangana tety anaty aterineto nataon'ny fianakavian'ireo Shinoa nanan-kavana tao anatiny, fotoana fohy taorian'ny loza, dia nandefa ny toy izao tao amin'ny Sina Weibo, karazana Twitter ao Shina:
Nanohina anay ihany koa ny fivoaran-draharaha mikasika ny MH17, izahay fianakavian'ny tao amin'ny MH370. Ny sasany latsa-dranomaso tsy mitsahatra eo am-panarahana tsy tapaka ny tatitra, ary mampiasa ny Wechat izahay mba hifanakalozan-dresaka mikasika ilay loza no sady mivavaka hatrany. Manantena anareo fianakavian'ny tao amin'ny MH17 mba hahery mandrakariva izahay. Nahatonga anay hanontany tena ireny lozam-piaramanidina matetitetika ireny hoe aiza ny fahazoana antoka ho an'ny sidina an'habakabaka? Tokony hiahiahy foana ve isika ary toy ny handeha hisosa amin'ireny kilalao “montagnes russes” ireny isak'izay hitaingina fiaramanidina?
Tamin'ny Zoma, nandefa hafatra fanampiny tamin'ny fiteny Anglisy ny Kaomitn'ny Fianakaviana: “Ho anay, mbola misitery ny hoe lasa aiza ireo havan-tianay. Mitohy isan'andro ny fijaliana sy tahotray.”
Nanolotra ny fiaraha-mioriny taty anaty media sosialy ireo Shinoa mpampiasa tranonkala sady maneho hevitra mikasika ilay loza mahatsiravina.
Nanampatra ny hatezerany tamin'ny Malaysia Airlines  i “LovelySmile Yue” :
Fiaramanidina Maleziana voatifitra nianjera. Mbola mila manome valiny ho an'ny Shinoa ny MH370, dia izao sahady ny fianjeran'ny MH17. Malaysian Airlines, miezaka miteny amin'izao tontolo izao ve ianareo fa ianareo no tompon'ny fianjerana fiaramanidina eto amin'izao tontolo izao? Tsy misy azonay atao, handry am-piadanana anie ireo namoy ny ainy!.
Ny hafa, toa an'ilay mpitondra teny fahiny tao amin'ny Ministeran'ny Fanabeazana, Wang Xuming, dia nomba  ilay kaompania, izay ianjadian'ny kiana sy ny olana ara-bola tsy mitsaha-mitombo ankehitriny :
Fiaramanidina iray hafa mpitatira olona no nianjera tao Okrana. Eo am-panolorana ny fiaraha-miorintsika amin'ny havan'ireo mpandeha tao anatiny, ilay loza dia mampahatsahy antsika ilay fiaramanidina Maleziana iray nanjavona ihany koa. Fianjerana fiaramanidina nanjo zotram-pitaterana anà firenena iray ihany tao anatin'ny fotoana fohy. Lahatra, karazana lahatra toy inona loatra ity! Noho izany, miombona amin'ny Malezia sy ny Malaysian Airlines aho ary ireo izay, indrisy, namoy ny ainy.
“Nianzihan Magical” avy ao Beijing nanoratra hoe :
Ny horohoro sy ny tolona rehefa mitsotsorika mamonjy ny tany [ny fiaramanidina] no azontsika omena dikany rehefa isika ilay mipetraka manoloana ny fahitalavitra iny. Toy ny vitsika ny olombelona, ary io no fotoana tsy ahitàna fahasamihafàna eo amin'ny hoe kilasy voalohany sy ny kilasy antonony (moramora kokoa), tsy maintsy miara-miatrika loza iray iraisany ny mpandeha rehetra. Handry am-piadanana anie ireo rehetra namoy ny ainy.
Meiyutang, mpiasa ao amin'ny gazety nasionalista Global Times, nandefa fisaintsainana  momba ny ho fiantraikan'ilay fianjeràna amin'ny fanohanan'i Rosia an'i Shina:
Araka ny fandalinana sasany avy amin'ireo namako, mety ho ireo hery [mpihoko] any atsinanana no nitifitra nanjera ilay fiaramanidina, saingy toa sahala amin'ny fihetsika niharo tsy fitandremana ihany ilay izy fa tsy tena niniana natao. Na dia hetsika tsy fitandremana aza iny, ho faizina [ireo izay tomponandraikitra] ; hitoka-monina bebe kokoa i Rosia amin'ny hoavy ary ny kabary imasom-bahoaka ataon'i Shina dia hiala lavitra amin'ny fanohanana an'i Rosia rehefa manatenteraka ny diplaomasiany ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/20/62062/
 araka ny: http://www.reuters.com/article/2014/07/17/us-ukraine-crash-airplane-idUSKBN0FM1TU20140717
 nilaza : http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/fyrbt_602243/t1175651.shtml
 nanamafy : http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/fyrbt_602243/t1175884.shtml
 nandefa : http://weibo.com/u/5080250272
 nandefa hafatra : http://www.weibo.com/5080250272/Be9vBdWvE?mod=weibotime
 Nanampatra ny hatezerany tamin'ny Malaysia Airlines: http://www.weibo.com/3161649414/Be6bcCUdt
 nanoratra hoe: http://www.weibo.com/woaidamingming
 nandefa fisaintsainana: http://www.weibo.com/1351779274/Be8gH6DNt?mod=weibotime